Uhlu lwezinombolo zefoni laseGuatemala | Uhlu Lwezingcingo | Database lakamuva Lokuposa
Uhlu lwezinombolo zefoni eGuatemala
Database lakamuva Lokuposa » Uhlu lwezinombolo zefoni eGuatemala
Izinombolo zocingo zaseGuatemala
Uhlu lwezinombolo zocingo lwaseGuatemala lungezwe lapha uhlu lwamuva lwabathengi lwe-Guatemala nolwamuva. Thola uhlu lwakho lwezinombolo zocingo eGuatemala kusuka eDathabheshini lakamuva ukusungula ibhizinisi lakho.
Ungasebenzisa lolu hlu lwefoni ukuthumela umnikelo webhizinisi lakho nge-SMS kanye nokushaya okubandayo. Thola inombolo yefoni yaseGuatemala yebhizinisi lakho bese udlulisela phambili izingcingo zakho noma kuphi emhlabeni.
Yonke imininingwane yethu isebenza futhi ibuyekeziwe. Thenga inombolo yocingo yaseGuatemala futhi uthole impumelelo ibhizinisi lakho elincane.
Thenga uhlu lwabathengi beGuatemala
IGUATEMALA CONSUMER FONI UHLU
Uhlu lwabathengi beGuatemala, uhlobo oluthile lwedatha ukufinyelela izinhloso zakho zomkhankaso we-telemarketing ezinqunywa yizinto ezahlukahlukene, okubandakanya imakethe yakho eqondiswayo kanye nabamukeli bemakethi be-sms, ukumaketha nge-imeyili kanye nomkhankaso wokubiza amakhaza.
Uhlu lwezinombolo zabathengi oluhlosiwe luzoza nedatha ebalulekile ongayisebenzisa ukukhulisa imizamo yakho yokuhlwaya. Gcina isikhathi sokubiza amathemba ngenxa yomthombo ohleliwe novuselelwe wezinhlu zocingo zabathengi baseGuatemala. Bheka lezi zinto njengehlu lokukhetha kusuka database yethu, eqoqwe futhi yahlungwa izisebenzi zethu zocwaningo ezinesiqinisekiso esikhulu.
Uhlu lwabathengi beGuatemala luqukethe ama-5,000 ahlanganiswe amarekhodi abuyekeziwe wohlu lwabathengi bezinombolo ezingama- $ 250, inkokhelo yesikhathi esithile kanye nesoftware engalandelwa ngokushesha engaba uhlobo lwefayela le-Excel CSV.
Ukuthenga, uhlu lwefoni lwabathengi baseGuatemala, kuyindlela esebenzayo kunazo zonke yebhizinisi, noma ngabe uhlela ama-aphoyintimenti, unikeza imininingwane, noma uthengisa ngqo ngocingo unenombolo yokuqondisa abantu efanelekile ukuqondisa amaklayenti ngempumelelo enkulu.
Database Lokungena Kamuva Lensiza ingumthombo wohlu lokuholela lwabathengi, ungaqiniseka ukuthi i-database yefoni yaseGuatemala isesikhathini, inikezela ngemininingwane efanelekile mayelana namakhasimende athembekile ngentengo engabizi yohlu lwefoni yebhizinisi kodwa inganikeza imininingwane ephezulu kakhulu thuthukisa ukuthengisa kwakho okungasebenzisa ibhizinisi lakho.
IGuatemala Inombolo Yefoni Umbuzo & Impendulo